स्थानीय तह निर्वाचन Archives | नेपालमाला
काठमाडौं : वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरी परिचालन गरेको छ । हालै भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी ४० दिनका लागि परिचालन गरिने छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्ड अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित ७…
काठमाडौं : देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेद्वार मनोनयनको संख्या १ लाख ३७ हजार भन्दा बढी पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले केहीबेरअघि अद्यावधिक गरेको विवरण अनुसार देशभर सबै पदमा गरी १ लाख ३७ हजार ५८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । विवरण…
काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज पनि मनोनयन दर्ता हुँदैछ । मनोनयन दर्ता आइतबारदेखि सुरु भएको हो ।आइतबार छुटेका दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले रित पुर्‍याएर आज मनोनयन दर्ता गर्न पाउनेछन् । आज दिउँसोसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । देशभरका…
स्थानीय तह निर्वाचन : कार्यक्षेत्रमा खटिए निर्वाचन अधिकृत
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई नियुक्त गरेर तालिम दिइसकेको छ । निर्वाचन अधिकृतहरु तालिम सकेर शनिबारदेखि नै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । ‘बैशाख ८ देखि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको…
राप्रपा नेपालले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा के–के छ ? (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं : राप्रपा नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा संघीयताको वर्तमान स्वरुप र संरचना नै परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुशासन र समृद्धीमा प्रदेश सरकार उपलब्धीमूलक देखिन छोडेको र खर्चालू मात्र…
निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुँदै : साइकल प्रयोग गर्न नपाइने, हेलिकप्टर चढ्न पाइने !
काठमाडौं : आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता आज मध्यरातिदेखि लागु हुँदैछ । आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक दलहरुलाई हस्ताक्षर गराइसकेको निर्वाचन आयोगले आज मध्यरातिदेखि मतदानको दिनसम्म कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । आचारसंहिता लागु…
चुनावी सुरक्षा रिपोर्ट : मधेश सबभन्दा संवेदनशील
काठमाडौं : आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिले चुनौती विश्लेषण गरेर रिपोर्ट बुझाएका छन् । जिल्लाबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा गृह मन्त्रालयले मतदान स्थललाई तीन समूहमा विभाजन गरेको छ । त्यही आधारमा…